Makedonia: Repoblika Twitter .mk · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, Magyar, English
Mampiasa ny voambolana “Repoblika Twitter” ny mpandray anjara amin'ny fihetsiketseham-panoherana ho fampahatsiahivana ny “Repoblika Krushevo”, fitondrana demokratika nitsangana nandritra ny fotoana fohy nandritra ny fikomian'i Ilinden tamin'ny 1903 ho fanoherana ny Ampira Ottoman; nahitana ny solontenan'ny vondrom-poko sy fivavahana rehetra tao amin'izany governemanta izany (hafa noho ilay fitambaram-pirenena balkan haorina tsy ho ela).
Saina Masedoniana misy sary famantarana Twitter. Sary avy amin'i Mite Kuzevski avy amin'ny IT.com.mk, nampiasaina nahazoana alalana
Viktor Arsovski avy ao amin'ny IT.com.mk no nanome vaovao [mk]:
Somary manofinofy ihany angamba saingy mety indrindra ho an'ilay voronkely Twitter birdie ny manidina ao anatin'ilay saina Masedoniana mandritra ny [andro faha-14] nihetsiketsehana nanoherana ny herisetran'ny polisy. Mifanaraka satria ny tahala 140 ifotoran'ny valantserasera no nampiasaina ho fifampizaram-baovao ao amin'ny fihetsiketseham-panoherana ary mbola mitohy ho amin'izany, ary io no mampifandray ny mpisera ao amin'ny fiaraha-monina .mk.
Na ianao aza afa-mitady amin'ny alalan'ny fampiasana ny tenifototra #protestiram sy #martin – Saika ny mpisera Twitter Masedoniana [mazoto] rehetra no tafiditra anaty fihetsiketseham-panoherana, miresaka momba ny voina mitranga, na ny fitakiana hampakaran-danja ny fampiasana ho an'ny polisy.
Miverina isan'andro isaky ny amin'ny enina ora hariva ny fihetsiketsehana eo afovoan-tanànan'i Skopje saingy tsy voatery harahina diabe hatrany.
Misy hetsika lehibe omanina ny Asabotsy 25 Jona, mitondra ny lohateny “Raisintsika an-tanana ny Parlemanta” [mk]. Sambany hivory manko ny mpikambana vao voafidy ho ao amin'ny Parlemanta ary mikasa ny hanao rojon'olombelona hiodidina ny Lapan'ny Antenimiera ny mpanao fihetsiketsehana.
Poster: "Hetsika. Asabotsy amin'ny 10. 25.2011. Eo anoloan'ny Mama Teresa. Avy eo eo anoloan'ny Parlemanta. Ho entitsika atolotra ny volavolam-panitsiana nosoratan'i Martin Neshkovski (1989-2011)."
[…] 2011/06/27 · Makedonia: Repoblika Twitter .mk […]
28 Jona 2011, 12:06